Motor Magnetic Magungano - China Ningbo Sine
Motor magnets a & Assembly Linear Motor magnets a - Neodymium Magnet Manufacturer Ningbo Sine Magnetic Company. Linear zvachose magineti injini ane hutachiwana imwe mhando kuti anogona kuchinja namahwindo remagineti kuti rakavhurika mumwe uye kushandura yemagetsi simba zvokuimba simba zvinofamba nenzira yakarurama mutsetse pasina zvenguva kutendeuka mashandiro. Main zvinhu: 1. Altamente vanoteerera uye basa, unogona urebese zvayo nzira uye haadi nazvo, pamwe pasi ruzha uye anotsvedzerera kufurira simba. 2 ...
Motor magnets a & Assembly
Linear zvachose magineti injini ane hutachiwana imwe mhando kuti anogona kuchinja namahwindo remagineti kuti rakavhurika mumwe uye kushandura yemagetsi simba zvokuimba simba zvinofamba nenzira yakarurama mutsetse pasina zvenguva kutendeuka mashandiro.
1. Altamente vanoteerera uye basa, unogona urebese zvayo nzira uye haadi nazvo, pamwe pasi ruzha uye anotsvedzerera kufurira simba.
2. Ko tisvike dzakakwirira kururama kushanda nesefa mutongi. Ane kutsanya pakukurumidza kumusoro mhanyisa nokukurumidza uye pfupi kuwedzera kwacho.
3. Ko zvikuru kureva vehurumende kushandiswa, bhizimisi uye zvechiuto.
High-nokukurumidza Rotors - Magnet Manufacturer Ningbo Sine Magnetic Company
Kunze magnets a zvechigarire, maererano chinokosha zvinodiwa vatengi ', tinogona kubereka nekuve pamagungano, akadai gwenya goko gungano, mukuru-nokukurumidza rotors uye chaiwo and injini rotors. Tinogona kupa iwe nemhando dzose dzakakwirira-nokukurumidza chinonzi motor rotor dzakakwirira chaitwa, Rotating kumhanya, zvakarurama uye ngura nemishonga. Uyewo, unogona kutengeswa motor mugodhi pamwechete. With makore chiitiko rinobva chikumbiro, tinogona kupa optimized kushanda urongwa rinobva zvinhu .
1. Kuderedza nokukurumidza inogona kusvika 60000-120000rpm
2. Nomazvo divi
High-nokukurumidza rotors munogara kureva injini mienzaniso uye mumaindasitiri brushless Motors, chine magnets a zvachose (sintered neodymium magnets a, jekiseni ferrite magnets a , waakaita neodymium magnets a kana samarium cobalt magnets a) uye mabheyaringi simbi.
Energy-okuponesa, ndirarame magadzirirwo miniaturization vari zvakanakira PM injini kana enzanisa nezvaiitwa motokari. Magungano aya vane torques makuru uye vakaderera ruzha. Tinogona ndikokere zvokubatisa, rachulis uye rinobva rotors pamwe kuti magungano.
Neodymium Magnetic akabatanidzwa pamwechete Manufacturer -Ningbo Sine Magnetic Company
Traditional okubatanidza ose kuonana. Upenyu basa couplers rine parinoperera abrasion uye vanofanira kushanda chisimbiso ezvinhu, asi leakage anogara kukonzerwa urema simba chisimbiso. Magnetic okubatanidza nemafungire asiri kuonana kushanda zvitaera pachishandiswa simba rinonzi magnetic coupling musimboti, umo upenyu nenzira yebasa miforo kwazvo. Uyewo, okubatanidza izvi vanoshandisa kunofambira mberi Simbiso pane guru chisimbiso, iyo yacho inotsidza mumwoyo zvinetso leakage.
With makore akawanda rinobva michina, zvachose magineti mugadziri Sine Magnetics Company Limited anogona kukupa basa basa renyika rinonzi magnetic zvigadzirwa. Zvichakadai, pamwe kugona kuzvimirira Kukudziridza uye kuongorora uye pamasikiro, tinogona kupa iwe optimized chigadzirwa mazano uye chikumbiro kuronga.
1. Non-kuonana rinobva okubatanidza vachishandisa simba rinonzi magnetic coupling dzidziso
2. kunofambira mberi chisimbiso, mukuru nemazvo uye kunyatsoshanda, hapana leakage
idzi rinobva okubatanidza zvinogona kushandiswa kwemakemikari nebepa rokuita maindasitiri, etc.
Automobile unokosha chaizvo kushanda nzvimbo NdFeB magineti, izvozvo anoita zvinokosha basa mairi, yakawanda Motors uye zvinoriumba vanoda magnets a kuti motokari kupenya, akangwara, zvakawanda uye zvakanaka, uye zviri nani kutyaira ruzivo.
Previous: Waterproof Magnetic bhatani
Next: AlNiCo magnets a
Motor magnets a